Tsamba yekutanga | RayHaber | raillynews
mushaRailway NewsNei Advertise?Dhindaina Sumo!
Zviripo 2020 Zvekusimudzira Mitengo - Kumakambani eTurkey
Iko kusanganiswa kwekushambadzira uye ruzivo. Izwi rekushambadza rinobva mumusanganiswa we "kushambadzira" uye "wekunyora". Paunenge uchishambadzira kushambadzira chero chigadzirwa kana sevhisi, inoitirwa kusvika kwazvino ruzivo nevaridzi vanonangwa. Sezvo isu tiri mune yezera zera, kushambadzira kushambadzira dzimwe nzira kwete kushambadzira kushambadzira kunokanganisa vese vashambadziri uye chinangwa vateereri. Naizvozvo, chiyero chekudzoka kwekushambadzira kushambadzira chakanyanya kukwirira.
Kushambadzira / kushambadzira
Aihwa Ad Ad Type statement muripo
3.1 Zuva nezuva (1 chidimbu) Mavara, anoonekwa uye anobatanidza, Dofollow indelible zvinyorwa 150 TL
3.2 Vhiki (3 zvidimbu) Mavara, anoonekwa uye anobatanidza, Dofollow indelible zvinyorwa 400 TL
3.3 Mwedzi (gumi nemaviri) Mavara, anoonekwa uye anobatanidza, Dofollow indelible zvinyorwa 1.500 TL
Nezve sampuro yekusimudzira zvinyorwa Click pano!
Mitengo haibatanidzi VAT yekushambadzira kwese.
Izvo zvinongedzo muzvinyorwa zvekusimudzira zvinofanirwa kunge zviri zvakanyanya 3.
Mifananidzo 5 kana 1 vhidhiyo inogamuchirwa.
Kubheja, kubhejera, zvinyorwa zvekusimudzira zvinopfuura makore gumi nemasere hazvigamuchirwe.
Kudhinda Pepa Pachena
Sumo yako kutaurirana @rayhaber.com Unogona kuitumira kukero yedu kana kuti unogona kutibata nharembozha iri pasi apa.
Mushure mekunge tsamba yekutanga yabudiswa, chinongedzo chechinyorwa chinotumirwa kumutengi. Pazuva rimwe chete mushure mekutarisa, mubhadharo unobhadharwa sekuendeswa kwebhangi kana PayPal kubhadhara.
Kubhadhara kunogamuchirwa muvhiki uye mwedzi nemapakeji pamberi.
Chaiyo 2020 Shambadziro yeNhau (Tsamba) Mitengo - Isiri - Makambani eTurkey
Iko kuratidzwa kwemashoko nekushambadza. Iko kushambadzira izwi chimiro chinobva mukubatanidzwa kwemazwi "kushambadzira" uye "kunyorwa". Paunenge uchiita kushambadzira kwekushambadzira chero chigadzirwa kana sevhisi, inoitirwa kuti isvike kune vanotarisana nevateereri neruzivo. Sezvo isu tiri mune yezera zera, kushambadzira kushambadzira dzimwe nzira pane kungofungidzira kushambadzira kunokanganisa vese vashambadziri uye chinangwa vateereri zvakanyanya. Nechikonzero ichi, mwero wekudzoka kwekushambadzira kwekushambadzira wakakwira zvakanyanya.
Kushambadzira Nhau / Tsamba Kuburitsa
Aihwa Ad Ad Type tsananguro Mutengo (par ad)
3.1 Zuva nezuva (1 zita) Mavara, chifananidzo uye chinongedzo, Dofollow haife yakapera 75 EUR
3.2 Vhiki (3 ads) Mavara, chifananidzo uye chinongedzo, Dofollow haife yakapera 200 EUR
3.3 Monthly (12 ads) Mavara, chifananidzo uye chinongedzo, Dofollow haife yakapera 750 EUR
Click pano yemasampuli!
VAT haina kubatanidzwa.
Kubheja, kubhejera, +18 yekusimudzira yezvinhu haina kugamuchirwa.
E-mail kushambadzira kwako kutaurirana @rayhaber.com kana iwe unogona kuonana nesu.
Mushure mekushambadza kushambadzira, chinongedzo chebhuku chinotumirwa kumutengi. Pazuva rimwe chete mushure me cheki, kubhadhara kunobhadhariswa sekubhanga kana kutumira PayPal.
Imotokari yemotokari yakavhurwazve nekusimbiswa kweAydınlı Haber
Mutungamiri Yıldırım Plant Wheel Lathe ichaparidzirwa
SEO yeEkusimudzira Chinyorwa RayHaber
İsa ApaydınRaillife magazini's yerli Nyika uye yenyika kugadzirwa kukurudzira muRail '…
Minister Arslan kuti "Central Corridor kuna Turkey pamwe Central Register" Article Raillif kuti ...
Chiziviso Chakanaka: Kuita Pedestrian Inopfuura Pasi paJazihan Station
Bursa akasangana negondohwe rakasangana nePir
Procurement ziviso: New Pedestrian Underpass kune iripo Pedestrian Underpass paMalatya Chitima Chiteshi…
Kufamba-fambisa Kwepamberi Kwokutanga Kwekufamba Pedyo